အိပ်နေရင်းနဲ့ အလွယ်တကူ ပြုလုပ်လို့ရတဲ့ ဝမ်းဗိုက်ကအဆီတွေကို ချေဖျက်ပေးမယ့် အသက်ရှုလေ့ကျင့်ခန်း . – Shwe Myanmar
အိပ်နေရင်းနဲ့ အလွယ်တကူ ပြုလုပ်လို့ရတဲ့ ဝမ်းဗိုက်ကအဆီတွေကို ချေဖျက်ပေးမယ့် အသက်ရှုလေ့ကျင့်ခန်း .
အိပ်နေရင်းနဲ့ အလွယ်တကူ ပြုလုပ်လို့ရမယ့် လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုကို မျှဝေပေးသွားပါမယ်။ စိတ်ကိုလည်း ငြိမ်သက်စေပြီးတော့ ဝမ်းဗိုက်ကို ချပ်ပေးမယ့် လေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်ပါတယ်။ Iron လို့ခေါ်တဲ့ ဒီနည်းစနစ်နဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ဝမ်းဗိုက်က ကြွက်သားတွေကို
သန်မာလာစေမှာဖြစ်ပြီး ၁ လအတွင်း ဗိုက်သိသိသာသာ ချပ်စေမှာပါ။ ပုံမှန်ပြုလုပ်ဖို့တော့ မမေ့ပါနဲ့နော်။ တစ်နေ့ကို ၅ ကြိမ်လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မနက်စောစော မနက်စာမစားခင် လုပ်ပေးတာဟာ ပိုပြီးကောင်းမွန်ပါတယ်။ အစပိုင်းမှာ ခက်တယ်လို့ ထင်ရပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ ပိုပြီး အဆင်ပြေသွားမှာပါ။
၁။ အရင်ဆုံးကျော်လှဲလိုက်ပါ။ လက်ကို ဝမ်းဗိုက်ပေါ် တင်ထားတာဖြစ်ဖြစ် ဘေးချထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ရပါတယ်။ ကြွက်သားတွေကို သက်သောင့်သက်သာရှိစေဖို့ ဒူးကွေးပြီး ထောင်ထားပါ။ ပြီးရင် အသက်ပြင်းပြင်းရှုပြီး ဝမ်းဗိုက်ကို ချပ်နိုင်သလောက် ချပ်ထားပေးပါ။
၂။ ပြီးရင် ၁၀ စက္ကန့်ကနေ ၁၅ စက္ကန့်ထိနေပေးပါ။ ပြီးရင် အသက်ရှုထုတ်ပြီး ဗိုက်ကို နဂိုအတိုင်းပြန်ထားလိုက်ပါ။
၃။ ပြီးရင် အသကနည်းနည်းပဲရှုပေးပြီးထုတ်ပေးပါ။ အဲဒီနောက် အသက်ကို ခပ်ပြင်းပြင်းထပ်ရှုပြီး ၁၀ စက္ကန့်ကနေ ၁၅ စက္ကန့်ထိ ဗိုက်ကို ချပ်ထားပေးပါ။ ပြီးရင် အသက်ပြန်ရှုထုတ်ပေးပါ။
၄။ ပြီးရင် အသက်ဖြည်းဖြည်းရှုပြီးထုတ်ပေးပါ။ အဲဒီနောက် စောစောကလိုပဲ အသက်ပြင်းပြင်းပြန်ရှုပြီး ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက် ဗိုက်ချပ်ထားပေးပါ။ ပြီးရင်ပြန်ရှုထုတ်ပါ။ တစ်နေ့ကို ၅ ကြိမ်လောက်လုပ်ပေးပြီး မနက်စာမစားခင် (သို့) ညအိပ်ယာမဝင်ခင်လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။
အိပျနရေငျးနဲ့ အလှယျတကူ ပွုလုပျလို့ရမယျ့ လကေ့ငျြ့ခနျးတဈခုကို မြှဝပေေးသှားပါမယျ။ စိတျကိုလညျး ငွိမျသကျစပွေီးတော့ ဝမျးဗိုကျကို ခပျြပေးမယျ့ လကေ့ငျြ့ခနျးဖွဈပါတယျ။ Iron လို့ချေါတဲ့ ဒီနညျးစနဈနဲ့ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျမယျဆိုရငျတော့ ဝမျးဗိုကျက ကွှကျသားတှကေို သနျမာလာစမှောဖွဈပွီး ၁
လအတှငျး ဗိုကျသိသိသာသာ ခပျြစမှောပါ။ ပုံမှနျပွုလုပျဖို့တော့ မမပေ့ါနဲ့နျော။ တဈနကေို့ ၅ ကွိမျလုပျပေးရမှာဖွဈပါတယျ။ မနကျစောစော မနကျစာမစားခငျ လုပျပေးတာဟာ ပိုပွီးကောငျးမှနျပါတယျ။ အစပိုငျးမှာ ခကျတယျလို့ ထငျရပမေယျ့ နောကျပိုငျးမှာ ပိုပွီး အဆငျပွသှေားမှာပါ။
၁။ အရငျဆုံးကြျောလှဲလိုကျပါ။ လကျကို ဝမျးဗိုကျပျေါ တငျထားတာဖွဈဖွဈ ဘေးခထြားတာပဲဖွဈဖွဈရပါတယျ။ ကွှကျသားတှကေို သကျသောငျ့သကျသာရှိစဖေို့ ဒူးကှေးပွီး ထောငျထားပါ။ ပွီးရငျ အသကျပွငျးပွငျးရှုပွီး ဝမျးဗိုကျကို ခပျြနိုငျသလောကျ ခပျြထားပေးပါ။
၂။ ပွီးရငျ ၁၀ စက်ကနျ့ကနေ ၁၅ စက်ကနျ့ထိနပေေးပါ။ ပွီးရငျ အသကျရှုထုတျပွီး ဗိုကျကို နဂိုအတိုငျးပွနျထားလိုကျပါ။
၃။ ပွီးရငျ အသကနညျးနညျးပဲရှုပေးပွီးထုတျပေးပါ။ အဲဒီနောကျ အသကျကို ခပျပွငျးပွငျးထပျရှုပွီး ၁၀ စက်ကနျ့ကနေ ၁၅ စက်ကနျ့ထိ ဗိုကျကို ခပျြထားပေးပါ။ ပွီးရငျ အသကျပွနျရှုထုတျပေးပါ။
၄။ ပွီးရငျ အသကျဖွညျးဖွညျးရှုပွီးထုတျပေးပါ။ အဲဒီနောကျ စောစောကလိုပဲ အသကျပွငျးပွငျးပွနျရှုပွီး ကိုယျတတျနိုငျသလောကျ ဗိုကျခပျြထားပေးပါ။ ပွီးရငျပွနျရှုထုတျပါ။ တဈနကေို့ ၅ ကွိမျလောကျလုပျပေးပွီး မနကျစာမစားခငျ (သို့) ညအိပျယာမဝငျခငျလုပျပေးသငျ့ပါတယျ။
ယာဉ်မောင်းများ မီးပွိုင့်မှာမီးဝါသွားမိရင် ဆက်မောင်းလို့ရမရ
ရှေးဟောင်းသင်္ကေတလေးတစ်ခုကို ရွေးချယ်ပြီး သင့်ရဲ့လက်ရှိပြဿနာအခက်အခဲတွေအတွက်အဖြေရှာကြည့်ရအောင်